လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ် စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၅) - MoeMaKa Media
Home / Currents / Hla Kyaw Zaw / International / လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ် စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၅)
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ် စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၅)
၁၉၇၈ ခုနှစ် တိန့်ရှောင်ပင်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တံခါးဖွင့်ပေါ်လစီအောက်မှာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ (ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် စသဖြင့်) ကရော နိုင်ငံများ (ဂျပန်၊ ဂျာမနီ) ကရော၊ ထုတ်ပေးသမျှ ချေးငွေများယူပြီး အခြေခံအ ဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ လမ်းတွေ၊ တံတားတွေ၊ သင်္ဘောဆိပ်တွေ၊ လေယာဉ်ကွင်းတွေ တနိုင်ငံလုံး အပြိုင်အဆိုင် ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို တနိုင်ငံလုံး ကွန်ရက်ဖြန့်သလို အခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့ ဆက်စပ်သွားတော့ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများချောမွေ့သွားပြီး တရုတ်တပြည်လုံး ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ ကျဆင်းလာပါတယ်။ အဲဒီချေးငွေများအပြင် ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနဲ့ ဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများကလည်း အလွန်အောင်မြင်လာမှုကြောင့် တရုတ်ကို ကမ္ဘာ့ စက်ရုံကြီးလို့တောင် ခေါ်တွင်လာမှုတွေရှိလာပါတော့တယ်။ ဒါတွေကြောင့် တရုတ်မှာ အရန်ငွေတွေ အလျှံပယ်ရှိလာရုံမက စီးပွားရေးအင်အားအရလည်း ကမ္ဘာဒုတိယ အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကပ်ကြီးက တရုတ်ရဲ့ ထုတ်ကုန်အားပြုတဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကို အားနည်းလာစေတဲ့အတွက် စီးပွားရေးပုံစံပြောင်းရေးကို လုပ်ဆောင်လာရပါတော့တယ်။ဒီမှာတင် တရုတ်ရဲ့ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီး ပေါ်လာတာပါ။
တရုတ်က သူ့နိုင်ငံမှာ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေ တည်ဆောက်ရာကနေရရှိခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ သင်ခန်းစာတွေကို အခြေခံပြီး တခြားနိုင်ငံအများအပြီားနဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်ပြီး စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ဖို့ကြိုးစားလာတာပါ။ ဒါ့အပြင် တရုတ်စက်ရုံပစ္စည်းများ (သံ၊ သံမဏိ၊ ရာဘာ) ကလည်း (အနောက်နိုင်ငံများ စီးပွားကျလာလို့) မရောင်းရဘဲ ပုံနေတာပါ။ ဒါကလည်း ဒီစီမံကိန်းကြီးပေါ်ပေါက်လာရမှုမှာ အကြောင်းတရားတရပ်အဖြစ် ပါရှိနေပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကို တရုတ်တွေစပြောကတည်းက အနောက်နိုင်ငံသတင်းလောကမှာ တရုတ်ဟာ အမေရိကန်ရဲ့ မာရှယ်စီမံကိန်းကို အတုယူလုပ်ဆောင်နေတာလို့ ပြောနေပါပြီ။ ဒါကို တရုတ်တွေက အတော်မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ တရုတ်သုတေသီတချို့က ဒီပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းနဲ့ မာရှယ်စီမံကိန်းဘယ်အချက်တွေမှာ တူ တယ်။ ဘယ်အချက်တွေမှာ ကွဲပြားမှုရှိတယ်ဆိုပြီး စနစ်တကျသုတေသနလုပ်ပြီး စာတမ်းတွေရေးလာတာတွေ့ရပါတယ်။
တရုတ်တွေဟာ သူတို့အလေ့အထအတိုင်း မာရှယ်စီမံကိန်းကို ခေတ်ကာလနဲ့အညီ တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိစွာနဲ့ တရုတ်မှုပြုလုပ် လိုက်တာပါပဲ။
စကားချပ်။ မာရှယ်စီမံကိန်း (European Recovery Program) ဆိုတာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး ပြာပုံအဖြစ်ရောက်နေတဲ့ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများ စီးပွားရေးပြန်လည်နလန်ထူလာရေးအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာရှယ် ဦးဆောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းပါ။ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ၂ ပွဲလုံးက လွတ်မြောက်ရုံမက အဲဒီစစ်ပွဲကြီးများပေါ်တည်ပြီး အချမ်းသာကြီးချမ်း သာလာတဲ့ အမေရိကန်ဟာ သူ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်ရော ဆိုဗီယက်ရဲ့အရှေ့ဥရောပကိုဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာနေတဲ့ ကွန်မြူနစ်ဝါဒပျံ့နှံ့လာမှုကို တားဆီးဖို့အတွက်ရော လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းပါ။ အမေရိကန်အကျိုးအမြတ် တွေရရေးအတွက် တချို့ချက်တွေဟာ ဦးတည်လုပ်ဆောင်တာတွေရှိပေမယ့် အနောက်ဥရောပနိုင်ငံများ စီးပွားရေးနာလန်ထူ လာရေးအတွက်တော့ အတော်အကျိုးပြုခဲ့ပါတယ်။) (ကိုးကား။www.britannica.com.)
ဒီတရုတ်ရဲ့ ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တခုဖြစ်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အုံတည်ဆောက်ရေးတွေမှာတော့ သက် ဆိုင်ရာနိုင်ငံများရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာပိုင်မှုနဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှ ဘက်စုံ အဆင့် ပေါင်းစုံ စုပေါင်းဆက်စပ်ထားတဲ့ ဘောင်ထဲမှာ ရေးဆွဲထားတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ တရုတ်ကဆိုပါတယ်။ ဒီ ဘောင်အ တွင်းပါဝင်တဲ့ အဓိကလမ်းကြောင်းများကတော့ ...
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အလွန်အရေးပါတဲ့ စြင်္ကန်လမ်းတည်ဆောက်တဲ့ စီမံကိန်းကြီး (၆) ခု ရှိပါတယ်။
၁။ ယူရေရှား ပေါင်းကူးလမ်းသစ်ကြီး (New Eurasian Land Bridge)
အာရှနဲ့ ဥရောပအကြား ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ စီးပွားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်ကစလို့ လုပ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆက်သွယ်မှုတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ပိုမိုကျယ်ပြီန့်လာပြီး တချို့ဒေသများ (ဥပမာ အလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း ဥရောပနိုင်ငံများ) ပါ ပါဝင်လာကြပြီး တချို့လမ်းတွေစဖောက်လုပ်နေပါပြီ။ ဥပမာ ဟန်ဂေရီ-ဆာဗီး ယားရထားလမ်း၊ တချို့လမ်းတွေကတော့ အခြေခံအားဖြင့် ပြီးစီးနေပါပြီ။ ဥပမာ တရုတ်ပြည် အနောက်ပိုင်းနဲ့ ဥရောပအ နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာအမြန်ရထားလမ်း။ (တရုတ်ပြည်အနောက်ဖက်နဲ့ ကာဇက်စတန် - ရုရှား - အနောက် ဥရောပဆက် သွယ်တဲ့လမ်း)။
၂။ တရုတ် - မွန်ဂိုလီးယား - ရုရှား စီးပွားရေးစြင်္ကန်လမ်း
၃ နိုင်ငံဖြတ်ပြီး ကားလမ်း ရထားလမ်း နယ်ခြားဂိတ်တို့အဓိကပါဝင်တဲ့ အခြေခံအဆောက်အအုံကွန်ရက်ကြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားနေရာတွေမှာ တချို့စီမံကိန်းများက ပြီးစီးနေပါပြီ။ (ဥပမာ မော်စကို - ကာဇန် အမြန်ရထားလမ်း)
၃။ တရုတ် - အလယ်အာရှ - အနောက်အာရှ စီးပွားရေးစြင်္ကန်လမ်း
တရုတ်အနေနဲ့ အဲဒီလမ်းတလျှောက်က နိုင်ငံများနဲ့ နှစ်နိုင်ငံကြားဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအများအပြားနဲ့ ဖြစ်စေ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ရေးအတွက် စာချုပ်များချုပ်ဆိုပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်နေတာ အတော်ခရီးရောက်နေပါပြီ။ ဆော်ဒီ အာရေဗျ အီရန် စတဲ့နိုင်ငံများတောင် ပါဝင်လာနေပါပြီ။
၄။ တရုတ် အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ် စီးပွားရေးစြင်္ကန်လမ်း
တချို့လမ်းများက ပြီးနေပါပြီ။ (ကူမင်း-ဘန်ကောက် အမြန်ရထားလမ်း) အဓိကအားဖြင့် တရုတ်နဲ့ အေစီယမ်နိုင်ငံများအ ကြား စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ယန္တာရားအတွက်ရော မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းတလျှောက်နိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရေးအတွက်ရော ပိုမိုမြန်ဆန်ချောမွေ့စေပါတယ်။
၅။ တရုတ် - ပါကစ္စတန် စီးပွားရေးစြင်္ကန်လမ်း
ဒီစီမံကိန်းဟာအတော်ခရီးပေါက်နေပါပြီ။ လမ်းတလျှောက်ရှိတဲ့ စီမံကိန်းအတော်များများလည်း ပြီးသလောက်ဖြစ်နေပြီး တချို့စီမံကိန်းများဆိုရင် အကျိုးအမြတ်တွေတောင်ရနေပါပြီ။ (ဥပမာ ဂွာတာဆိပ်ကမ်း)။ ဒါ့အပြင် ဒီစြင်္ကန်လမ်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုအတွက် တတိယနိုင်ငံများပါဝင်လာရေး ဖိတ်ခေါ်လာတဲ့အခါ နိုင်ငံအများအပြား (ဆော်ဒီအာရေဗျ) ဝင်လာတာတွေ့ရ ပါတယ်။
၆။ ဘင်္ဂလာဒက်ရှ် - တရုတ်- အိန္ဒိယ - မြန်မာ စီးပွားရေးစြင်္ကန်လမ်း
၄ နိုင်ငံပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အလုပ်အဖွဲ့က ရေးဆွဲထားတဲ့ဘောင်အတွင်း ဘက်စုံက စီမံကိန်းကြီးများရှိပါတယ်။ ဒီအထဲ မှာ ...
တရုတ်-မြန်မာ စီးပွားရေးစြင်္ကန်လမ်း ပူးတွဲကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြီး လောလောဆယ်မှာ မူဆယ် - မန္တလေး ရထားလမ်းအတွက်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကျောက်ဖြူစီးပွားရေးဇုံနဲ့ ရေနက်ဆိပ် ကမ်းစီမံကိန်း စတာတွေကို ဖော်ဆောင်လုပ် ကိုင်နေပါတယ်။
ဒီစြင်္ကန်လမ်းမကြီးများအတွင်း ဆက်စပ်မှုအတွက်တည်ဆောက်မယ့် အဓိကလမ်းကြောင်းများကတော့ ...
ဥပမာ - ၅ နှစ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရထားလမ်းများအကြား အခုအချိန်ထိ အအောင်မြင်ဆုံးလုပ်ငန်းကတော့ တရုတ်-ဥရောပ ရထားလမ်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၈ အကုန်မှာ တရုတ်-ဥရောပရထားလမ်းလုပ်ငန်းဟာ အာရှ - ဥရောပ ၁၆ နိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း (၁၀၈) မြို့အကြား ဆက်စပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
တရုတ်သတင်းတပုဒ်မှာ တွေ့တာကတော့ ဂျာမနီက မော်တော်ကားများ ရထားစင်းလုံးနဲ့သယ်လာတာ တရုတ်က ဂိတ်ဆုံး ယီဝူးဘူတာမှာ ဂျာမန် သံအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကြိုဆိုပြီး မိန့်ခွန်းပေးရာမှာ အခုလို ရထားနဲ့သယ်လာနိုင်တဲ့အတွက် သယ် ယူခစရိတ် ဘယ်လောက်သက်သာသွားတယ်။ သယ်ယူချိန်လည်း ဘယ်လောက်တိုတောင်းသွားတယ်ဆိုတာတွေ ပြော သွားတာကြားရပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ ယူရေရှားနိုင်ငံများအကြား အမြန်လမ်းများ အတော်ပြီးစီးနေပြီး (တရုတ် - ကာဂျစ်စတန် -ဥစဘက်ကစ္စတန် အမြန်လမ်း ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ စတင်လည်ပတ်နေပါပြီ။) တခြားနိုင်ငံများလည်း (ဥပမာ - ဥရောပအရှေ့ဖက်နိုင်ငံများ) လည်း ပါဝင်လာကြပါပြီ။
တရုတ်နဲ့ အာစီယံနိုင်ငံများအကြား အမြန်လမ်းဖောက်နေမှုများကလည်း အရှိန်အတော်ရနေပါပြီ။
တရုတ်က ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းအတွင်း ပါဝင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း (၄၇) နိုင်ငံနဲ့ ရေကြောင်းသွားလာမှုဆိုင်ရာ စာချုပ်ပေါင်း (၃၈)ခု ချုပ်ဆိုထားပြီးပါပြီ။ ဂရိက ပီရာယက်စ်ဆိပ်ကမ်းဟာ ဥရောပမှာ တရုတ်ကပထမဆုံး တည်ဆောက်တဲ့သင်္ဘောဆိပ်ပါ။သင်္ဘောဆိပ်တင်မကပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးဇုံကိုလည်း တဆက်လည်း တည်ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ တရုတ် ရဲ့ ပိုးလမ်းမရေလမ်းကြောင်းရဲ့ ဥရောပဝင်ပေါက်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါ့အပြင် ပါကစ္စတန်က ဂွာတာဆိပ်ကမ်းတို့ သိရိလင်္ကာက ဟန်ဘန်တိုတာ ဆိပ်ကမ်းများလည်း အတော်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်လို့ လုပ်ငန်းအတော်များများလည် ပတ်နေပါပြီ။ (ဒီဆိပ်ကမ်းများအကြောင်း သီးခြားရေးပါ့မယ်။)
တရုတ်က နိုင်ငံပေါင်းနဲ့ဒေသပေါင်း (၁၂၈) နဲ့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကြား လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုထားပြီးပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ်အတွင်း တရုတ်နဲ့ တခြားပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းထဲက နိုင်ငံများနဲ့ နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းပေါင်း (၁၂၃၉) ခု ဖွင့်ပြီးပါပြီ။ ဒါဟာ တရုတ်ပြီည်ရဲ့ အဲဒီကာလအတွင်းဖွင့်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းလိုင်း စုစုပေါင်းရဲ့ ၆၁ . ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံဟာ တခြားပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းဝင်နိုင်ငံများနဲ့ လျှပ်စစ်လိုင်းများ၊ ရေနံပိုက်လိုင်းများ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လမ်းများ၊အနုမြူစွမ်းအင်၊ စွမ်းအင်သစ်နဲ့ ကျောက်မီးသွေး စတဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ပေါင်းစုံမှာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရေးစာချုပ်များ အများအပြီားချုပ်ဆိုထားပါတယ်။
၆။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူလမ်းများ
တရုတ် - မြန်မာ၊ တရုတ် - ပါကစ္စတန်၊ တရုတ်ကာဂျစ်ကစ္စတန်၊ တရုတ် - ရုရှား စတဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ကေဘယ်လ်လိုင်း တွေ တည်ဆောက်ပြီးပါပြီ။ တခြားနိုင်ငံအများအပြီားနဲ့လည်း တည်ဆောက်နေပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးအတွင်းက အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေး အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်များအတွင်းက လူပြေီာများလှတဲ့ ဆိပ်ကမ်းများအကြောင်းကို အပိုင်း (၆) မှာတင်ပြီပါ့မယ်။
၁။ Beijing Review.9-5-2019.pg12-14 (A New Stage by Yu Lintao)
၂။ China Daily.23-4-2019.The BRI progress,contributions and prospects.(The leading group for promoting the BRI)
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ် စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၅) Reviewed by Aung Htet on 4:17 PM Rating: 5